Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKWIKWỌ ASIAN Ndị na-egwu bọọlụ Turkish Hakan Calhanoglu Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi nke Hakan Calhanoglu na-egosiputa ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ezi na ulo, ndi nne na nna, nwunye ya, umuaka ya, ndu ya na ndu ya.
N'okwu dị mfe, anyị na-ewetara gị njem njem nke Midfielder, site na nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ onwe gị sie ike, nke a bụ oge ọ bụ nwata rue ụlọ okenye - nchịkọta zuru oke nke Hakan Calhanoglu Bio.
Ee, gị na gị maara nke ahụ Onye na-egwu egwuregwu bọọlụ Turkish na-aga ịghọ onye egwuregwu bọọlụ na mba ụwa dị ka onye otu ya Zlatan Ibrahimovic. Agbanyeghị, ọtụtụ ndị fans amaghị maka nsogbu ọ meriri iji nweta nke a na Life Life. Yabụ, anyị akwadebela Bio ya maka gị naanị na ebuteghị gị ọzọ, ka anyị bido.
Hakan Calhanoglu Child Akụkọ:
N'ihi na ndị na-ebido ndụ Biography, Hakan Calhanoglu a mụrụ na 8th ụbọchị nke February 1994. Ọ bịara n'ụwa site n'aka nna ya, Huseyin Calhanoglu na nne ya, Naime Calhanoglu, na Mannheim, Germany. You maara?… Onye nwere ọgụgụ isi na-enweghị atụ bụ ọkpara nke ụmụ abụọ amụrụ site na njikọ dị n'etiti ndị mụrụ ya na-ese onyinyo ebe a.
Zute nne na nna ya mara mma, Huseyin na Naime Calhanoglu.
Hakan Calhanoglu -bọchị Na-eto Eto:
Site na ntinye, a zụlitere Turk na-eto eto na nwanne ya nwoke, bụ Muhammed, n'okporo ámá nke Mannheim. N'ebe ahụ, ha zụlitere omume nke iso ụmụaka ndị ọzọ na-egwu bọl n'okporo ámá. Ebe ọ bụ na nna ya nwere ịhụnanya miri emi maka football, ọ dịghị mgbe ọ na-ajụ usoro mgbede nke ụmụ ya na ndị ọgbọ ha.
Hakan Calhanoglu Ezinụlọ:
Amụrụ na Germany apụtaghị na Turk chefuru ịdị adị nke nna nna ya. Dị ka onye ọkpụkpọ guzosiri ike, Calhanoglu akwụwo ọtụtụ nleta n'ebe ọ malitere. Kedu ihe ọzọ?… Ọ bụ nwa amaala obodo Konursu nke Mpaghara Bayburt na Turkey. N’afọ 2010, obodo ya nwere ihe dịka mmadụ 1,573.
Nke a bụ ebe ezinụlọ Hakan si.
Hakan Calhanoglu Mụrụ Ezinụlọ:
Nke mbu, ochichi ya abughi udiri mmadu puru isi kowa dika ọgaranya. Agbanyeghị, ha kwụsiri ike na ego, ọbụnakwa jiri obi ụtọ na-eto ụmụaka n'oge Hakan. Obi dị m ụtọ na ndị nne na nna nwata ahụ gụrụ ezigbo akwụkwọ gbasara ego. N'ihi ya, ha nwere ike ijikwa ego ha n'ụzọ kachasị akụ na ụba.
Hakan Calhanoglu Akụkọ Na-adịghị Agbanwe:
Mgbe ndị Turk kụrụ elekere asaa, nna ya gwara ya ka ọ debanye aha n’ụlọ akwụkwọ dị n’obodo ha. N'oge ahụ, Calhanoglu bụ nwa na-emeghị ihe ọjọọ nke naanị ya maara otú e si agba bọl n'akụkụ ọ bụla. Mana ndị mụrụ ya nwere nnukwu olile anya na nwa ha nwoke ga-eme nke ọma ka ọ sonyere na Waldhof Mannheim agụmakwụkwọ.
Na mbu, onye na-etiti obodo anaghị enwe ike iru ihe ndị nkuzi ya kwuru. Agbanyeghị, ọ na-ebute ọrụ nlekọta ya nye ndị mụrụ ya tupu ya echee echiche banyere ahụ erughị ala ya. N'ihi ya, Calhanoglu gbalịsiri ike imeziwanye ikike ya ma mee ka ezinụlọ ya dị mpako.
Hakan Calhanoglu Ndụ Ndụ Mmalite:
Mgbe afọ asatọ gosipụtara maka Waldhof, Karsruher SC gụrụ onye setịpụrụ ihe ahụ bụ onye kpọbatara ya n'òtù ndị ntorobịa ha. Do enye ama ọtọn̄ọ ndisan̄a ke bọl. N'otu oge ahụ, Calhanoglu bụ onye lere anya Mesut Ozil akpọrọ ka ọ pụta maka obodo ya n'oge dị iche iche.
Daysbọchị ya na Karsruher SC dị ebube.
Ya na ndị mụrụ ya na-ele anya maka mmezu ka mma, onye na-agbapụ ogologo oge gbagara Hamburger SV na 2013. Oge ya na ụlọ ọrụ German dị mkpirikpi. Agbanyeghị, ọ bụ na Hamburger ka onye ọkpụkpọ Turkey ahụ nwara igosipụta Cristiano Ronaldo na-ewere free-kicks. n'ezie, ọ maara nke ọma na iwere mpempe akwụkwọ dị anya.
Hakan Calhanoglu Bio - Roadzọ a ma ama Akụkọ:
Mgbe ọ kwagara Bayer Leverkusen na 2014, 20 dị afọ iri na ụma hụrụ onwe ya na-eto eto karịa nrọ nna ya. N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ hụrụ na € 14.5 nde etinyekwara maka inweta ya agaghị ala n'iyi. N'ihi ya, ọ malitere ịchọta ihe mgbaru ọsọ ma na-enyere ọtụtụ aka.
Enweghị obi ụtọ ka ukwuu maka Hakan karịa oge ọ tụrụ goolu.
Maker Onye na-egwu egwuregwu a nwere ikike ijidesi AC Milan ike na 2017. Ọ bịanyere aka na nkwekọrịta afọ anọ ruru € 24 na ụlọ ndị Italy - ihe ngosi nke mere ka nne ya na-etu ọnụ banyere ya mgbe niile.
Ọ gafere ihe ọzọ dị mkpa site na ịbanye na AC Milan.
Inye nọmba jersey nọmba 10 mere ka ọtụtụ ndị na-atụ anya ịtụ anya arụmọrụ pụrụ iche na Turk. N'ụzọ dị mwute, nwa mbụ nke ezinụlọ Calhanoglu ezuteghị ndị na-akwado ya. Ọ na-ekwekọghị na pitch ma rụsie ọrụ ike iji melite enweghị ike ya.
Hakan Calhanoglu Bio - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
N'oge na-adịghị anya, onye nwere ọgụgụ isi na-enweghị atụ mere mgbanwe nke ihu igwe nke mere ka ọtụtụ ndị nyocha na-ekwu banyere ya. Mara ya? Name Aha ya mere akụkọ ihe mere eme ebe ọ na-enyere aka maka Rafael Leao, bụ onye meriri ihe mgbaru ọsọ kachasị ọsọ na Serie A na 21st Disemba 2020. Karịsịa, ihe mgbaru ọsọ nke agbachapụrụ na 6.2 sekọnd kpọmkwem na elekere ghọrọ ihe mgbaru ọsọ kachasị ọsọ nke a na-agbanye na egwuregwu ise kachasị na Europe.
O nyeere Rafael Leao aka inweta ihe mgbaru ọsọ kachasị ọsọ na akụkọ Serie A.
Ka m na-ede Bio a, ọtụtụ klọb na-achụ nta maka mbinye aka ya. Otú ọ dị, anyị na-eche na Juventus nwere ike ịkwụsị ịbanye Hakan Calhanoglu na 2021. Ikekwe onye nwere ọgụgụ isi nwere ike ọ gaghị agbatị nkwekọrịta ya na AC Milan ma ọ bụrụ na ha emeghị ka ụgwọ ọnwa ya kwa afọ ruo € 7 nde. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Banyere Nwunye Hakan Calhanoglu:
Abịa n’ihe metụtara obi, onye setịpụrụ ihe zoro ụkwụ karịa onye obodo ya, N'okpuru Cengiz. N'ezie, Hakan lụrụ enyi nwanyị nwanyị ọ bụ nwata, Sinem Gundogdu, na Mannheim na 2017.
Otú ọ dị, akụkọ ịhụnanya ha gara nke ọma dị ka nke a na-akọ n'akụkọ ifo. Naanị ọnwa ole na ole ọ gbachara akwụkwọ, mmekọrịta Calhanoglu gbawara n'ihi na nwunye ya boro ya ebubo na ọ na-achụ nwanyị ọzọ. N'ihi ya, ọ fọrọ nke nta ka ọ gbaa alụkwaghịm nwa agbọghọ ya na ya nwere ogologo oge ghọrọ nwunye.
Obi dị m ụtọ na ndị di na nwunye ahụ mere ka ha dị na 2018 wee kpebie inye alụmdi na nwunye ha ọhụụ ọhụrụ. N'ihi ya, njikọ ha dugara n'ịmụrụ nwa nwanyị mara mma aha ya bụ Liya. Ka m na-ede Bio a, nna Liya onye bụkwa enyi Ibrahimovic na-atụ anya nwa ya nke abụọ.
“Ọrụ ebube ọzọ na-abịakwute ezinụlọ anyị. Obi dị anyị ụtọ na Liya anyị ga-abụ nwanne nwanyị n’afọ n’afọ. Bịa, nwa ọhụrụ gbasiri ike. ”
Ya na nwunye ya na nwa ya nwanyị, Hakan nwere afọ ojuju.
Hakan Calhanoglu Ndụ Nke Onwe:
Ọtụtụ Fans ejiriwo ịdị umeala n'obi ya tụnyere nke Caglar Soyuncu. N'ezie, ọ dị nwayọ, kwuo eziokwu ma bụrụkwa ebumpụta ụwa. O doro anya, enwere oge mgbe Calhanoglu na-etinye ụfọdụ egwuregwu ụmụaka naanị iji belata nrụgide na ijide oge furu efu na ndị enyi.
Na mpụga olulu ahụ, enweghị oge ihe na-adịghị mma na Turk gbara afọ 24.
E nyekwara onye etiti ahụ nnukwu onyinye egwu. Mgbe ndị enyi ya nwere ụbọchị ọmụmụ ma ọ bụ abụọ iji mee ememme, Hakan bụ mgbe niile bụ nwoke jupụtara na ngosi ahụ na ịdị ndụ. N'ezie, ọ gaara eme nnukwu DJ ma ọ bụrụ na bọl anaghị arụ ọrụ maka ya.
Ngwá ọrụ DJ ya gafere oke.
Hakan Calhanoglu si ebi ndụ:
Mgbe ọ na-egosi AC Milan, ụgwọ ọnwa ya na-arị elu ruo ihe ruru ego ruru € 2.5 (2021 Stats). Ka m na-ede Bio a, nwata nwoke tolitere na Mannheim na ebi ndu okomoko.
Site na ego ya, ọ zụtala ọtụtụ ụgbọala na-acha ọkụ ọkụ na ụlọ mara mma. Ọbụna ya na ezinụlọ ya na-eme njem n'ụgbọelu dị oke ọnụ. Nnyocha na-egosi na Hakan Calhanoglu enwetara atụmatụ Net Worth nke .9.9 2021 dịka nke XNUMX.
Ndụ ya dị mfe ịga ma jupụta na ahụmịhe dị egwu.
Hakan Calhanoglu Ezigbo Ndụ Ezinụlọ:
N’etiti ihe ịga nke ọma n’ọrụ ya, enwere mmadụ ole na ole ndị okwukwe ha na-agbanwe agbanwe nyerela ya ka ọ rụọ ọrụ siri ike. Ha esoro ya na-eme ememme mgbe ọ bụla ọ dị mma ma na-agba ya ume mgbe ihe na-agazighị agazi. Lee ngalaba ihe omuma banyere ndi ezinulo ya.
Obi ụtọ ya na-aba ụba mgbe ọ bụla ya na ezinụlọ ya nọkọrọ oge.
Banyere nne Hakan Calhanoglu:
N'ihi nne ya (Naime Calhanoglu), onye na-eto eto toro eto nwere nnukwu echiche nke omume ọma. Enweghi okwu zuru oke iji kọwaa ịdị mma nke Oriakụ Naime n'ịzụ ụmụ ya. Ihe anyị maara bụ na ọ bụ nne gụrụ akwụkwọ ma na-echekwa echiche nke na-ebute ọdịmma ụmụ ya ụzọ tupu nkasi obi ya.
Nne ya dị obere karịa ma e jiri ya tụnyere afọ ya.
Banyere Nna Hakan Calhanoglu:
Onye ọsụ ụzọ nke mmasị Hakan na egwuregwu bụ nna ya, Huseyin Calhanoglu. Ọ bụ onye egwuregwu bọọlụ na-abụghị onye egwuregwu nke agụụ ya maka egwuregwu na-anwụghị, ọbụlagodi n'agadi ya.
Zute nna Hakan, onye isi ihe kpatara njem njem bọọlụ ya.
Mgbe ezumike nká ya, Mr Huseyin gara n'ihu na-azụ ọtụtụ ụmụaka ka ha nwee ike ịrụ nnukwu ọrụ na football. Kedu ihe ọzọ?… Nna Hakan bụ onye guzobere Calhanoglu football center (ụlọ egwuregwu na Mannheim).
Banyere ụmụnne nwanne Hakan Calhanoglu:
Bụ nwa nwoke nke ezinụlọ ya pụtara na onye ọkpụkpọ egwu German ga-esetịpụrụ nwanne ya nwoke, Muhammed Calhanoglu ezigbo ihe nlereanya. N'ezie, o meela, taa, nwanne ya nwoke nke ọ tọrọ nara otu ụzọ ahụ ya na nna ya.
Ọ dị ka nwanne ya nwoke nwere ihu ọchị mara mma karịa ya.
Muhammed bụ onye na-eto eto nke nwere ọrụ ntorobịa ya n'otu agụmakwụkwọ (Waldhof na Karlsruher SC) dị ka nnukwu bro. N'ụzọ dị mwute, ọ kwadobeghị onwe ya n'ọkwá dị elu nke egwuregwu mba ụwa.
Banyere Hakan Calhanoglu's ikwu:
N'ihe dị ka afọ 2021, ụmụ nwanne nne Hakan abụọ, Turan na Kerim, na-egosi Hoffenheim U19 na FC Schalke 04, n'otu n'otu. N'etiti ha, Turan Calhanoglu enwetawo ihe mgbaru ọsọ na-emetụta ọbara ya. Ka m na ede Bio a, enweghi ihe omuma banyere nne na nna ya ochie.
Zute ụmụ nwanne nne ya, Turan (L) na Kerim (R).
Hakan Calhanoglu Eziokwu efu:
Iji mechie akụkọ ndụ anyị dịpụrụ adịpụ, nke a bụ ụfọdụ eziokwu banyere ya nke ga-enyere gị aka ịghọta nghọta nke akụkọ ndụ ya.
Eziokwu nke 1: Okwu ikpe na Trabzonspor:
Tupu nkwekọrịta ya abịa na njedebe na Bayer Leverkusen, FIFA machibidoro Calhanoglu ọnwa anọ n'ihi mmebi iwu. N'ịbụ onye natara € 100,000 site na ụlọ ọrụ Turkish Trabzonspor, Distance Shooter kwụsịrị ịgbatị nkwekọrịta ya na Karlsruhe na 2011.
N'ihi ya, FIFA ga-abanye na foto nke nghọtahie ma mee ka ọ kwụghachi the 100,000 ọ natara na Trabzonspor. Ọ bụ oge siri ike maka onye na-ewepụta ya, mana nne ya na nna ya nyeere ya aka ịlaghachi n'ụkwụ ya ọzọ.
Eziokwu nke 2: A Crazy egbe Akụkọ:
Otu n'ime ihe egwu dị egwu nke Hakan zutere, dị ka nna ya kpughere na 2014, bụ nke akpado na Crazy egbe Akụkọ. Ihe a niile mere mgbe Turkey tufuru egwuregwu asọmpi World Cup na Netherlands na October 2013.
N'oge ahụ, Hakan na Omer Toprak nọ na họtel ha mgbe onye otu ibe ha, Gokhan Tore, na enyi ha a na-amaghị ama ji egbe jiri egwu ha abụọ. Tore kpara arụ jọgburu onwe ya n'ihi na enyi ya nwanyị na-akpa na enyi Toprak. Obi dị m ụtọ na nsogbu ahụ niile kwụsịrị n'enweghị onye ọ bụla nwụrụ.
Eziokwu nke 3: Rygwọ ọnwa na ụgwọ ọnwa nke abụọ:
Nnyocha na-egosi na nwa amaala Turkey ga-arụ ọrụ ọ dịkarịa ala afọ 5 iji nweta ihe Hakan na-enweta n'ime otu ọnwa.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Hakan Calhanoglu's Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Dị ka ụmụ amaala ibe ya, Chenk Tosun, Hakan bụ ezigbo onye Alakụba. N'ezie, ọ bụ otu n'ime nde mmadụ 4.4 na-ekpe Alakụba na Germany. Site na nwata, nne ya akuziri ya otutu mgbe banyere iwu na ntuzi aka nke okwukwe Muslim ya. Na 2015, Calhanoglu, ya na nna ya na nwanne ya nwoke, gara Kaaba na Mecca.
Ezinụlọ ya elegharaghị omume dị mkpa nke okpukpe ha anya.
Obi abụọ adịghị ya na ikike ya karịrị nke onye otu, Arda Turan. N'ịbụ onye nwere ọtụtụ nkà na ngwá agha ya, onye ọkpụkpọ a mụrụ na Germany eguzobewo onwe ya dị ka ngwa agha nke ọtụtụ klọb ga-achọ na etiti ha. Iji meziwanye ogo ya, ọ ga-arụ ọrụ na ikike ya ịchịkwa bọl na ikuku.
N'ikpeazụ, Life Life of Calhanoglu egosiwo na anyị ga-efunahụ ọitementụ nke ohere ọ bụla na-enweghị mmali nke echiche ma ọ bụ nrọ. Ọ bụ ezie na nna ya mepụtara ya ụzọ, Hakan bụ ọrụ maka ịmezu oku doro anya nke akara aka.
O kwesiri ka anyi jaa nne ya mma, onye noo mgbe nile igba ya ume n’oge nsogbu. Ọzọkwa, mgbalị nke Huseyin (papa ya) na Muhammed (nwanne ya nwoke) enyerela aka mee ka ọrụ Hakan pụta. Ọ bụ ha niile nye ha ekele na ọ nweela ike ị nweta nnukwu bọọlụ.
Daalụ maka ịgụ Hakan Hakan Calhanoglu Child Story and Biography Facts. Buru n'uche na ndị otu anyị na Lifebogger na-ahụ anya iji mee ka afọ ju gị site na akụkọ nwata nke na-atọ gị ụtọ.
Jiri obiọma kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọta ihe ọ bụla nke na-adịghị ka ọ dị mma na isiokwu anyị. Ma ọ bụghị ya, anyị na-ewetara gị nchịkọta nke akụkọ ndụ ya na data wiki n'okpuru.
Aha n'uju: Hakan Calhanoglu
aha otutu: Ọ bụ
Age: 27 afọ na ọnwa 3.
Ebe amụrụ onye: Mannheim, Germany
Nna: Huseyin Calhanoglu
Nne: Naime Calhanoglu
Nwanne: Muhammed Calhanoglu
Nwunye: Sinem Gundogdu
Children: Liya (naanị nwa nwanyị nke Jenụwarị 2021)
Ezigbo Net: Million 9.9 million (2021 Ọnọdụ)
Rygwọ ọnwa kwa afọ: Million 2.5 million (2021 Ọnọdụ)
Ebe nke Si Malite: Obodo Konursu nke Baygbè Bayburt na Turkey
Bọchị gbanwee: Eprel 14, 2021